AIRTOX Absolute 3 sharaabaad | AIRTOX
AIRTOX Absolute 3 sharaabaad
Absolute 3 sharaabaadku waa sharaabaadkeena farsamada ee cusub, oo ay ka buuxaan tikniyoolajiyado cusub iyo astaamo la yaab leh, oo had iyo jeer cagahaaga ka dhigi doona kuwo qalalan, raaxo leh oo cusub.
Guryo noocee ah ayaa sameeya Absolute 3 si weyn?
Qabow & Aniga® Nidaam: nidaam xakameyn qoyaanka caqliga leh oo marinnada isku dhafan ee ku jira fiilooyin gaar ah oo dharka ka fog cagahaaga ka ilaaliya, adkeynta heerkulka ugu habboon ee xajmiga oo ka dhig cagahaaga kuwo qalalan.
Dhisme aan hagaagsaneyn: waa mid si adag u taageerta ka hortagga abuuritaanka finanka.
Kuleylka aadka u hufan iyo xakamaynta qoyaanka ayaa baabi'isa urka xun.
Ma aha inaad mar dambe ka walwasho inaadan ku habboonayn kabahaaga!
AIRTOX Absolute Sharaabaadyo ayaa laga heli karaa saddex midab: madow, turquoise (Absolute 1) iyo jaalaha dhalaalaya (Absolute 2).
Qabow & Aniga® nidaam: mid ...
Cool&Me® nidaamka qaboojinta
AIRTOX Absolute 1 sharaabaad Socodka
AIRTOX Absolute 2 sharaabaad Socodka